လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ အားကစားကွင်း မြေသားဖို့ခြင်း၊ ဘောလုံ...
လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ အားကစားကွင်း မြေသားဖို့ခြင်း၊ ဘောလုံး ကွင်းပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ပွဲကြည့်စင်အသစ်တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်း အတွက် တင်ဒါခေါ်ရန်ကုန်၊ မတ် ၂၁ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အားကစားနှင့် ကာယပညာဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် (ငွေလုံးငွေရင်း) အသုံးစရိတ် ရန်ပုံငွေဖြင့် လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ အားကစားကွင်း (၄ ဒသမ ၄၉၀) ဧက (၂') အမြင့် မြေသားဖို့ခြင်း၊ ဘောလုံး ကွင်းပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ပွဲကြည့်စင် အသစ်တည်ဆောက်ခြင်း (၁၀...
Posted Date :19-Mar-2019
Expire Date :01-Apr-2019
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ နည်းပညာ ပြန့်ပွားရေးစင်...
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ နည်းပညာ ပြန့်ပွားရေးစင်တာ၊ မြို့နယ်ရုံးနှင့် ခရိုင်ရုံးများအတွက် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများ ၀ယ်ယူရန်တင်ဒါခေါ်ရန်ကုန်၊ မတ် ၁၉စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေး ဦးစီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးပညာပေးရေးဌာနခွဲမှ JICA ODA Loan ဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးဝင်ငွေတိုးတက်ရေး (AIIP) စီမံကိန်းတွင် ဆောင်ရွက် မည့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ နည်းပညာ ပြန့်ပွားရေး စင်တာ၊...
Posted Date :21-Mar-2019
Expire Date :23-Apr-2019
သတင်းစာပုံနှိပ်လုပ်ငန်းမှထွက်ရှိသော ဘေးထွက်ပစ္စည်းများေ...
သတင်းစာပုံနှိပ်လုပ်ငန်းမှထွက်ရှိသော ဘေးထွက်ပစ္စည်းများ ရောင်းချရန် တင်ဒါခေါ်ရန်ကုန်၊ မတ် ၁၉ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းနှင့် စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်း၊ မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတိုက်၊ ကြေးမုံသတင်းစာတိုက် (ရန်ကုန်) ရှိ သတင်းစာပုံနှိပ်လုပ်ငန်းမှထွက်ရှိသော ဘေးထွက်ပစ္စည်းများအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ရောင်းချသွားမည် ဖြစ်သည်။အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် တင်ဒါစနစ်တို့၏ အသေးစိတ်ိအချက်အလက် များကို (၂၁.၃.၂၀၁၉) ရက်မှ (၂၆.၃.၂၀...
Expire Date :26-Mar-2019
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးကုသရေးဦးစီးဌာန၊ မြောင်းမြမြို့နယ်၊ ရန်မနိုင်တိုက်နယ် ဆေးရုံနှင့် ၀န်ထမ်းအိမ်ရာ ဆောက်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းအတွက် တင်ဒါခေါ်ရန်ကုန်၊ မတ် ၁၇ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးကုသရေးဦးစီးဌာန၊မြောင်းမြမြို့နယ်၊ရန်မနိုင်တိုက်နယ် ဆေးရုံနှင့် ၀န်ထမ်းအိမ်ရာဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရ ရန်ပုံငွေဖြင့် တည်ဆောက်ရေးလုပ်င န်းများ ဆောင်ရွက်လိုပါသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသာ...
Expire Date :22-Apr-2019
ပုသိမ်တံတားအမှတ် (၂)၏ ပင်မ တံတား ရေလယ်လုပ်ငန်းများအတွက်...
ပုသိမ်တံတားအမှတ် (၂)၏ ပင်မ တံတား ရေလယ်လုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများ ၀ယ်ယူရန် တင်ဒါခေါ်ရန်ကုန်၊ မတ် ၁၈ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ တံတားဦးစီးဌာန၊ တံတားအထူးအဖွဲ့ (၁၆)မှ ၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ပြည်ထောင်စု ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်ခရိုင်၊ ပုသိမ်မြို့တွင်းရှိ ပုသိမ်တံတားအမှတ် (၂)၏ ပင်မ တံတား ရေလယ်လုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများကို လုပ်ငန်းခွင်အရောက် မြန်မာ (...
Posted Date :14-Mar-2019
Expire Date :11-Apr-2019
သစ်မာသစ်ပါးလွှာ (၂၃၃၅ ဒသမ ၂၅၆၁) ကုဗမီတာအား ၀ယ်ယူရန် တင်ဒ...
သစ်မာသစ်ပါးလွှာ (၂၃၃၅ ဒသမ ၂၅၆၁) ကုဗမီတာအား ၀ယ်ယူရန် တင်ဒါခေါ်ရန်ကုန်၊ မတ် ၁၄မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ သစ်အခြေခံစက်မှုလုပ်ငန်းဌာနမှ သစ်မာ သစ်ပါးလွှာ (၂၃၃၅ ဒသမ ၂၅၆၁) ကုဗမီတာအား အမေရိကန် ဒေါ်လာဖြင့် ရောင်းချသွားရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူထားသည်။ရောင်းချမည့်ရက်မှာ (၂၈.၃.၂၀၁၉) ရက် မွန်းလွှဲ (၁၃း၀၀)နာရီဖြစ်ပြီး ရောင်းချမည့်နေရာမှာ သစ်အခြေခံ စက်မှုလုပ်ငန်းဌာန (ရုံးချုပ်) ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့ဖြစ်သည်။အိတ်ဖွင့်လေ...
Posted Date :15-Mar-2019
Expire Date :28-Mar-2019
သူနာပြုသင်တန်းကျောင်း ၊ ဖလမ်းမြို့တွင် ဆောင်ရွက်မည့် တည...
သူနာပြုသင်တန်းကျောင်း ၊ ဖလမ်းမြို့တွင် ဆောင်ရွက်မည့် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် တင်ဒါခေါ်ရန်ကုန်၊ မတ် ၁၄သူနာပြုသင်တန်းကျောင်း ၊ ဖလမ်းမြို့မှ (၂၀၁၈-၁၉) ဘဏ္ဍာနှစ် အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ အတွက် မြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်ကုမ္ပဏီများအား အိတ်ဖွင့် တင်ဒါခေါ်ယူ ထားသည်။(၁) ရေလှောင်ကန်အသစ်ဆောက်လုပ်ခြင်း ပေ (၁၀ x ၁၀ x ၆) ၂ လုံး(၂) ဆရာများအိမ်ရာရှေ့မြေထိန်းရံနံနှစ်ဆင့်ဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့်ြ...
Posted Date :12-Mar-2019
မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၊ ရုံးလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြု...
မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၊ ရုံးလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် ရုံးသုံးစက်နှင့် ပရိဘောဂများ ၀ယ်ယူရန် တင်ဒါခေါ်ရန်ကုန်၊ မတ် ၁၃မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၊ ရုံးလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် ရုံးသုံးစက်ပစ္စည်း (၉)မျိုးနှင့် ရုံးသုံးပရိဘောဂ (၂)မျိုး စုစုပေါင်း (၁၁)မျိုးအား ၀ယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူထားသည်။တင်ဒါစည်းကမ်းချက်များ ပါဝင်သော အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံကို (၁၅.၃.၂၀၁၉) ရက်မှ (၂၂.၃.၂၀၁၉) ရက်အထိ ရုံး...
Posted Date :22-Mar-2019
ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်ပရ၀ဏ်အတွင်း ဆိုင်ခန်းများ (၁)နှစ်...
ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်ပရ၀ဏ်အတွင်း ဆိုင်ခန်းများ (၁)နှစ် ရောင်းချရေးအတွက် တင်ဒါခေါ်ရန်ကုန်၊ မတ် ၁၂ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်ပရ၀ဏ်အတွင်းရှိ ဆိုင်ခန်းများ (လေ့ကျင့်ရေးအထက်တန်းကျောင်း ဆိုင်ခန်းများ အပါအ၀င်)တွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁ ရက်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ် မတ်လ ၃၁ ရက်အထိ (၁)နှစ် ရောင်းချရေးအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ပေးသွင်းရန် တင်ဒါခေါ်ယူထားသည်။တင်ဒါပုံစံနှင့် တင်ဒါစည်းကမ်းချက်များကို (၂၈.၃.၂၀၁၉) ရက်မှ (၉.၄.၂၀၁၉) ရက်အ...
Posted Date :28-Mar-2019
Expire Date :09-Apr-2019
မြိုင်နှင့် ပေါက်မြို့နယ်တွင် ဓာတ်အားလိုင်းများ တည်ဆောက...
မြိုင်နှင့် ပေါက်မြို့နယ်တွင် ဓာတ်အားလိုင်းများ တည်ဆောက်ရန် တင်ဒါခေါ်ရန်ကုန်၊ မတ် ၁၂ကျောက်ခွက်-လက်ပံတို-အရာတော်ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့မြေ (ပခုက္ကူခရိုင်)၏ (၂၀၁၈-၁၉) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် လူမှုရေး တာဝန်သိမှု (CSR) ရန်ပုံငွေဖြင့် မြိုင်မြို့နယ်၌ 11 KV ဓာတ်အားလိုင်း (၇)မိုင်နှင့် ပေါက်မြို့နယ်၌ 11 KV ဓာတ်အားလိုင်း (၇ ဒသမ၅)မိုင် တည်ဆောက်ရန် တရားဝင်အသိအမှတ်ပြု (လိုင်စင်ရအဖွဲ့အစည်း) ကုမ္ပဏီများထံမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်...
ပြည်သူ့ကျန်မာရေးဦးစီးဌာနက IT & Operation Equipment , C...
ပြည်သူ့ကျန်မာရေးဦးစီးဌာနက IT & Operation Equipment , Consumables for Outbreak Investigation and Response ပစ္စညးများ ၀ယ်ယူရန် တင်ဒါခေါ်ရန်ကုန်၊ မတ် ၁၁ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာနမှ (၂၀၁၈-၁၉) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် Asian Development Bank (ADB) ၏ ချေးငွေဖြင့် IT & Operation Equipment , Consumables for Outbreak Investigation and Response ပစ္စညးများ ၀ယ်ယူရန်အတွက် အိတ်ဖွင...
Posted Date :25-Mar-2019
Expire Date :26-Apr-2019
မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် နေပြည်တော်ရုံးတွင် နိုင်ငံတကာ...
မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် နေပြည်တော်ရုံးတွင် နိုင်ငံတကာ အရည်အသွေးသတ်မှတ်ချက် ANSI TIA-942 Tier3အဆင့်မီ Disaster Recovery (DR) Site ၏ Facilities တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းအတွက် တင်ဒါခေါ်ရန်ကုန်၊ မတ် ၁၁မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် နေပြည်တော်ရုံးရှိ လက်ရှိအဆောက် အဦတွင် နိုင်ငံတကာအရည်အသွေးသတ်မှတ်ချက် ANSI TIA-942 Tier3အဆင့်မီ Disaster Recovery (DR) Site ၏ Facilities တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင...
Posted Date :11-Mar-2019
Expire Date :10-Apr-2019
အားကစားနှင့် ကာယပညာဦးစီးဌာနက တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းအချို...
အားကစားနှင့် ကာယပညာဦးစီးဌာနက တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းအချို့ဆောင်ရွက်ရန် တင်ဒါခေါ်ရန်ကုန်၊ မတ် ၇အားကစားနှင့် ကာယပညာဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ထောင်စုဘတ်ဂျက်တွင် ခွင့်ပြုပါရှိသည့်တည်ဆောက် ရေး လုပ်ငန်းများအား တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုလိုင်စင်ရသည့် ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီများ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ် ထားသည်။(၁)မန္တလာသီရိအားကစားကွင်းအတွင်း Multi Purposeမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအားကစားရုံထပ်တိုးဆောင်ရွက်ခြင်းလ...
Posted Date :08-Mar-2019
Expire Date :08-Apr-2019
ပည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှ IT & Operation Equipment ၊...
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှ IT & Operation Equipment ၊ Consumables for Outbreak investigation and response ပစ္စည်းများ ၀ယ်ယူရန် တင်ဒါခေါ်ရန်ကုန်၊ မတ် ၇ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာနမှ (၂၀၁၈-၁၉) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် Asian Development Bank (ADB) ၏ ချေးငွေဖြင့် IT & Operation Equipment ၊ Consumables for Outbreak investigation and response ပစ္စည်းများ ၀ယ်ယူရန်အတွက် အိတ်...
Expire Date :26-Feb-2019
မြောင်းမြမြို့၊ သူနာပြုသင်တန်းကျောင်းအား ကျောင်းအုပ်ကြီ...
မြောင်းမြမြို့၊ သူနာပြုသင်တန်းကျောင်းအား ကျောင်းအုပ်ကြီးနေ အိမ်နှင့် ၀န်ထမ်းများအိမ်ရာ တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် တင်ဒါခေါ်ရန်ကုန်၊ မတ် ၆ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ကျန်းမာရေးလူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်ဦးစီးဌာန၊ မြောင်းမြမြို့၊ သူနာပြုသင်တန်းကျောင်း ကို ၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ပြည်ထောင်စုအစိုးရ ခွင့်ပြုရန် ပုံငွေဖြင့် ကျောင်းအုပ်ကြီးနေအိမ်နှင့် ၀န်ထမ်းများအိမ်ရာ တည် ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများအား ဆေ...
Posted Date :07-Mar-2019
Expire Date :31-Mar-2019
ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်များရောင်းချရန် တင်ဒါခေါ်ရန်ကုန်၊ မတ် ၃မြန်မာ့ရေနံဓာတ်တုဗေဒလုပ်ငန်းလက်အောက်ရှိ အမှတ်(၁) ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်စက်ရုံ (မင်းဘူး) မှ ပရိုပိန်းရေနံဓာတ်ငွေ့ရည် (၂၀၀) တန် နှင့် ရေနံဓာတုဗေဒစက်ရုံစု (သံပုရာကန်) မှ ပရိုပိန်းရေနံဓာတ်ငွေ့ရည် (၁၀၀) တန် စုစုပေါင်း တန်(၃၀၀) ကို ရောင်းချပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။၀ယ်ယူလိုသူများအနေဖြင့် လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပေးထားသည့် ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည် တင်...
Expire Date :02-Feb-2019
မြင်းခြံမြို့ အဆင့်မြင့်အိမ်ရာစီမံကိန်းအတွက် အကျိုးတူဆေ...
မြင်းခြံမြို့ အဆင့်မြင့်အိမ်ရာစီမံကိန်းအတွက် အကျိုးတူဆောင်ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ရန်ကုန်၊ မတ် ၃မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မြင်းခြံမြို့တွင် မြေဧရိယာ (၁၂ ဒဿမ ၂၇) ဧက ပေါ်တွင် တည်ဆောက်မည့် အဆင့်မြင့်အိမ်ရာစီမံကိန်းအတွက် အကျိုးတူဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည့်သူများကို မြင်းခြံမြို့နယ် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ တင်ဒါခေါ်ယူထားသည်။အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို မြင်းခြံမြို့နယ် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ သတ်မှတ်ထားသောလျှောက်လွှာဖြင့် လေ...
Expire Date :18-Mar-2019
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့ရှိ သဘာ...
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့ရှိ သဘာဝဘေးဒဏ်ခံရသည့် အခြေခံပညာကျောင်းများအား ကျောင်းဆောင်သစ်များ ဆောက်လုပ်ရန် တင်ဒါခေါ်ရန်ကုန်၊ မတ် ၄၂၀၁၅ ခုနှစ် ရေဘေးသင့်အခြေခံစာသင်ကျောင်းများအား ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရ၏ ထောက်ပံ့လှူဒါန်းငွေဖြင့် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အခြေခံပညာဦးစီးဌာနနှင့် JICA တို့ ပူးပေါင်း၍ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး နှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့ရှိ သဘာဝဘေးဒဏ်ခံရသည့် အခြေခံပညာကျောင်းများအားေ...
Posted Date :06-Mar-2019
Expire Date :29-Mar-2019
ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ်၊ (၁၆၈) ရပ်ကွက်၊ ရိုးမတန်...
ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ်၊ (၁၆၈) ရပ်ကွက်၊ ရိုးမတန်ဖိုး နည်းအိမ်ရာစီမံကိန်းတွင် လိုအပ်သည့် Infrastructure လုပ်ငန်း များ ဆောင်ရွက်ရန် တင်ဒါခေါ်ရန်ကုန်၊ မတ် ၁ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြို့ပြနှင့် အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနမှ ဒဂုံမြို့သစ် (ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ်၊ (၁၆၈) ရပ်ကွက်၊ ရိုးမတန်ဖိုး နည်းအိမ်ရာစီမံကိန်းတွင် လိုအပ်သည့် Infrastructure လုပ်ငန်းများကို (၂၀၁၈-၁၉) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်ရန် တင်ဒါခေါ်...
Posted Date :01-Mar-2019
မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနက ဓာတ်ခွဲခန်းသုံး၊ လုပ်င...
မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနက ဓာတ်ခွဲခန်းသုံး၊ လုပ်ငန်းသုံးနှင့် ရုံးသုံးစက်ပစ္စည်းများ ၀ယ်ယူရန် တင်ဒါခေါ်ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ အသုံးပြုရန် လိုအပ်လျက်ရှိသော ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးစက်ပစ္စည်း ကိရိယာ (၁)မျိုး၊ လုပ်ငန်းသုံး စက်ပစ္စည်းကိရိယာ (၃)မျိုးနှင့် ရုံးသုံးစက်ပစ္စည်းကိရိယာ (၄)မျိုး၊ စုစုပေါင်း (၈)မျိုးကို ၀ယ်ယူရန်အတွက် ဈေးနှုန်းအဆိုပြုလွှာ တင်သွင်းနိုင်ကြောင်း အိတ်ဖွင့်တင...
Expire Date :25-Mar-2019